Fanavaozana ny WhatsApp amin'ny Android, ny fomba hahazoana ny kinova farany (2021) maimaim-poana | Androidsis
Ny fitazonana ireo rindrambaiko havaozina amin'ny endriny farany dia zava-dehibe hatrany. Na izany aza, tsy vitsy ny mpampiasa mampiahiahy amin'ny fanavaozana ny rindranasa noho ny olana mety hitranga. Ny sasany kosa tsy manana ny fanavaozana ny fampiharana noho ny tsy fahalalana fotsiny, noho izany, hampianarinay anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao hanavao WhatsApp.
Azo antoka fa anisan'ireo naniry ianao mametraka WhatsApp maimaim-poana raha vao vaovao ny finday, noho izany dia zava-dehibe ny fananana ny farany kinova nohavaozina ny WhatsApp, tsy hoe noho isika tsy mahita ny vaovao izay nampidirina isaky ny kinova manokana, fa satria ny fanavaozana koa dia mitondra vaovao amin'ny ambaratonga fiarovana, ary zava-dehibe ny fiainana manokana, indrindra rehefa te-hamonjy viriosy amin'ny Android toy ireo izay mampiditra antsika isika dokam-barotra amin'ny WhatsApp.
1 Ahoana ny fanavaozana ny WhatsApp amin'ny Android
2 Tsy afaka manavao ny WhatsApp aho
2.1 Tsy afaka manavao ny WhatsApp aho noho ny tsy fahampian'ny toerana
3 Ahoana ny fomba hanavaozana ny WhatsApp maimaimpoana
4 Vaovao farany WhatsApp Plus
5 Nahoana no zava-dehibe ny fanavaozana ny WhatsApp?
6 Ahoana ny fanavaozana ny WhatsApp Web
7 Ahoana ny fomba hanaovana tester beta ary hitsapana ny kinova WhatsApp farany?
8 Ahoana ny fanavaozana ny WhatsApp amin'ny APK tsy misy Google Play
9 Azo atao ve ny manavao ny fanavaozana WhatsApp mandeha ho azy?
Ahoana ny fanavaozana ny WhatsApp amin'ny Android
Mitovy ihany ny tranga Android, tsotra miditra amin'ny Google Play Ny fivarotana dia azontsika atao ny manavao ilay rindranasa, satria ny pejy voalohany dia hampiseho aminay izay rindranasa misy fanavaozana misy ary eo no ahafahanao manavao ny WhatsApp ho an'ny Android.
Mazava ho azy na izany aza misintona whatsapp APK Azo atao izany amin'ny loharanom-pahalalana mahazatra rehetra, havaozina izy ity raha apetrantsika.
Tsy afaka manavao ny WhatsApp aho
Betsaka ny antony tsy ahafahanay manavao ny WhatsApp, miankina amin'ny sehatra ampiasainay. Raha ny Android dia ampidirintsika ny antony malaza indrindra ahazoana a hadisoana amin'ny fanavaozana ny Whastapp:
Raha mahita ny kaody hadisoana 413, 481, 491, 492, 921, 927 na 941, Ataovy izao manaraka izao:
Fafao ny kaonty Google anao: mandehana mankany Fikirana > kaonty > Google > safidio ny kaontinao dia vonoy
Atsangano indray ny fitaovana ampiasainao mba hanampiana ny kaonty Google anao indray.
Hamafana ny cache apetraka: Fampiharana> Fampiharana> Google Play Store> Hamafana cache ary hamafana angona.
Tsy afaka manavao ny WhatsApp aho noho ny tsy fahampian'ny toerana
Raha sendra ny lesoka 101, 498 na 910 ianao dia fantatra amin'ny hoe "Tsy ampy ny toerana fitahirizana”, Ho an'ity ny dingana voalohany dia ny mamafa ny cache araky ny efa natoronay teo aloha. Raha mbola tsy vitanao dia tsy hanana safidy hafa ianao fa hamafa ireo rakitra hita ao amin'ireto fizarana manaraka ireto ao anatin'ny fitehirizan'ilay fitaovana:
Ny lahatahiry horonan-tsary dia hita ao amin'ny: / WhatsApp / Media / WhatsApp Videos / Sent.
Ny fampirimana sary dia ao amin'ny: / WhatsApp / Media / WhatsApp Images / Sent.
Ny fampirimana hafatra am-peo dia ao amin'ny: / WhatsApp / Media / WhatsApp Voice Notes.
Ny lesoka hafa koa dia ny lesoka "Kitapo fonosana tsy mety ”, noho izany dia tsy maintsy ampidinintsika mivantana ny WhatsApp .apk avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny fampiharana, avy eo dia handeha any amin'ny Android Settings isika, hamakivaky ny "Security" ary rehefa tonga any, dia hampavitrika ny "Loharano tsy fantatra". Izao dia mila miverina amin'ny fisintomana fampirimana fotsiny isika ary mametraka WhatsApp indray amin'ny kinova farany.
Ahoana ny fomba hanavaozana ny WhatsApp maimaimpoana
Tsy misy olana, na inona na inona fomba ampiasainao, maimaimpoana tanteraka ny WhatsApp, koa aza matahotra, manavao ny WhatsApp maimaimpoana Azo atao ihany koa izany, koa aza manahy momba ny fanavaozana, ny serivisy WhatsApp dia maimaimpoana mandritra ny fiainana.
Noho izany, mampahatsiahy anao izahay fa tokony hiahiahy amin'ny mpamatsy vola rehetra manandrana manome anao vola ianao ho takalon'ny famandrihana WhatsApp, satria afaka manamafy izahay fa maimaim-poana tanteraka ilay rindranasa sy ny fampiasana azy, mihoatra ny fandoavan-karaman'ny mpandraharaha anay ho takalon'ny ho an'ny drafitra angoninay.
Vaovao farany WhatsApp Plus
Raha ny fanovana WhatsApp dia mila mandeha amin'ny fampidinana ny .APK an'ny Whatsapp Plus afaka manavao azy. Noho izany, hanavao ny WhatsApp Plus dia tsy maintsy mandeha any amin'ny mpamatsy, ampidino indray ny kinova farany farany misy an'ny WhatsApp mod ary araho ny torolalan'ny mpamorona. Amin'ity LINK ity dia ho hitantsika ireo kinova rehetra ary mazava ho azy ny fanavaozana farany ny WhatsApp Plus, noho izany dia tsy maintsy ampidinintsika fotsiny ilay .apk ary avereno apetraka eo ambonin'ny WhatsApp Plus efa napetraka.
Tsy isalasalana fa lasa WhatsApp ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo ampiasain'ny olona an-tapitrisany isan'andro isan'andro, noho izany dia ilaina ny fahafahanao manao havaozy whatsapp amin'ny kinova farany, satria hanome anao fanatsarana fahombiazana, fampandehanan-draharaha vaovao ary hamaha ireo olana mety hitranga amin'ny filaminana mety hampidi-doza ny fiainanao manokana.
Nahoana no zava-dehibe ny fanavaozana ny WhatsApp?
Matetika, WhatsApp dia vaovao. Ny rindranasan-kafatra hafatra dia manolotra andiam-panatsarana maromaro, toy ny fiasa vaovao. Na dia mety misy aza ny fanatsarana ny fiasa na ny fiarovana. Noho izany, rehefa misy kinova vaovao toy izany dia zava-dehibe ny fanavaozana.
Misy antony maromaro mahatonga azy io ho lehibe tazomy ny app hatrany. Amin'ny lafiny iray, ny fahazoana miditra amin'ireo fiasa vaovao sy fanatsarana rehetra tonga amin'izany. Raha tsy manavao ianao dia tsy afaka mankafy azy ireo. Ary maro amin'ireo fiasa vaovao no mamela anao hampiasa WhatsApp tsara kokoa.
Etsy ankilany, araka ny efa nolazainay, fampidirana fiarovana ihany koa. Amin'izany fomba izany, manana ny kinova vaovao, miaro tena ianao manoloana ny fandrahonana mety hitranga. Noho izany, ny findainao Android dia tsy dia mora tohina amin'ny fanafihana, viriosy na fandrahonana hafa rehetra misy amin'izao fotoana izao. Ny fampiharana dia mety ho vavahady mankany amin'ny findaintsika amin'ity karazana toe-javatra ity.
Azonao atao ny manavao WhatsApp avy amin'ny Google Play, mitady ny mombamomba ny fampiharana. Azonao atao ihany koa ny mitady ny fanavaozana amin'ny findainao Android, ao amin'ny fizarana fampiharana dia tadiavo ilay fampiharana ary terena ny fikarohana fanavaozana. Na dia mandeha ho azy aza ny ankamaroan'ny fanavaozana. Ka tsy mila manao na inona na inona ianao hahazoana azy ireo.
Ahoana ny fanavaozana ny WhatsApp Web
WhatsApp dia manana ny endriny manokana ho an'ny solosaina, antsoy ny WhatsApp Web. Toy ny amin'ny kinova ho an'ny finday avo lenta dia havaozina miaraka amina fiasa vaovao izy io. Na izany aza, mpampiasa maro no mety tsy mahalala ny fanavaozana ity kinova fampiharana ity.
Raha ny mahazatra, rehefa misy fanavaozana, handray fampandrenesana ianao. Ka ny zavatra mahazatra dia ny tsindrio fotsiny ilay rohy izay miseho eo amin'ny efijery. Araka izany, efa mahazo miditra amin'ny fanavaozana an'ity kinova ity ianao. Saingy, raha tsy mandeha ity fomba ity na mbola tsy nahazo ity fampandrenesana ity ianao dia misy fomba iray hafa, tena tsotra sy haingana hahazoana izany.
Tsy maintsy miditra ny pejy manaraka. Ampifanaraho aminy ny telefaoninao ary sokafy ny telefaona amin'ny telefaona. Ao amin'ny tranonkala mahazo kaody QR ianao, fa mila mamaky izany amin'ny telefaona ianao. Hanavao ny WhatsApp Web avy hatrany izany. Afaka mankafy ilay kinova vaovao ianao izao.
Ahoana ny fomba hanaovana tester beta ary hitsapana ny kinova WhatsApp farany?
WhatsApp dia manana kinova beta, izay hahafahanao manandrana ireo fiasa vaovao rehetra tonga eo alohan'ny olon-kafa. Raha tianao dia afaka ny ho tonga tester beta an'ny fampiharana ianao. Ny fahaizana manao azy dia zavatra tena tsotra. Misy dingana vitsivitsy fotsiny.
Voalohany dia mila miditra ny pejy WhatsApp Beta ianao, izay tsy maintsy miditra ity rohy. Ao anatiny dia angatahana ianao hiditra amin'ny kaonty Google anao. Avy eo dia hiseho eo amin'ny efijery izy bokotra iray manao hoe "Tongava mpanandramana". Ny sisa ataonao dia tsindrio io bokotra io. Amin'izany fomba izany dia efa mpandinika beta ianao.
Rehefa nahavita an'io ianao, dia tokony ampidino ilay kinova farany azo alaina. Avy eo mankanesa any amin'ny Play Store. Ao, ao amin'ny piraofilin'ny WhatsApp, azonao atao ny mahita fa efa tester beta ianao, amin'ny anaran'ny fampiharana. Manaraka, havaozy ny fampiharana amin'ny findainao Android. Amin'ireto dingana ireto dia efa tester beta ianao ary ho afaka hizaha ireo vaovao tonga amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra ireo.
Ahoana ny fanavaozana ny WhatsApp amin'ny APK tsy misy Google Play
Mety manana ny WhatsApp APK ianao, izay nakarinao tany ivelan'ny Google Play. Azo atao izany ho an'ireo mpampiasa izay tsy anohana ny telefaoniny. Amin'ity tranga ity dia somary tsy mitovy ny fizotran'ny fanavaozana ny fampiharana.
Satria tsy afaka miditra amin'ilay rakitra ao amin'ny Google Play toy ny mahazatra izahay. Soa ihany, ny WhatsApp mihitsy no manampy antsika amin'ny fizotrany. Ao amin'ny pejiny web Manana fizarana ho an'ny fitaovana Android izahay, izay azonao idirana Ity rohy ity. Eto no ahafahanao misintona ny APK.
Hitanay ny APK WhatsApp, an'ny kinova farany farany an'ny app. Noho izany, ampidino amin'ny telefaona ny rakitra Android ary miroso amin'ny fanavaozana azy amin'izany fomba izany. Raha manana kinova taloha an'ny rafitra fiasa ianao, izay tsy manohana an'i Google Play intsony, ohatra, dia io no fomba tsara indrindra. Ankoatra ny fiarovana.
Azo atao ve ny manavao ny fanavaozana WhatsApp mandeha ho azy?
Rehefa mametraka WhatsApp amin'ny findainao Android ianao, ilay rindranasa matetika miaraka amin'ny fanavaozana mandeha ho azy. Mety tsy ho toy izany ny anao, na amin'ny fotoana iray dia hapetrakao amin'ny fomba hafa. Ny tombony azo amin'ny fanavaozam-baovao mandeha ho azy dia tsy mila manao na inona na inona ianao. Noho izany, raha te hampavitrika azy ireo ianao dia tsotra be izany.
Ampidiro amin'ny findainao Android ny fampiharana Play Store. Aorian'izay, asehoy ny menio ankavia ary ampidiro ny fizarana voalohany, izay antsoina hoe "Ny fampiharana sy lalao”. Manaraka, avy eo amin'ireo kiheba ambony, kitiho ny napetraka. Ireo rindranasa anananao amin'ny findainao dia haseho anaty lisitra iray.
Mikaroha ary ampidiro WhatsApp ao anatin'io lisitra io. Rehefa tafiditra ao amin'ny piraofilan'ny fampiharana ianao dia tsindrio ireo teboka mitsivalana telo izay hita eo ankavanan'ny efijery. Rehefa manao an'io ianao dia misy safidy maromaro hiseho eo amin'ny efijery. Ny farany dia ny fanavaozana mandeha ho azy. Raha banga ny kianja dia tsindrio ary hiseho ny marika maitso.
Amin'izany fomba izany dia manana ianao nampihetsika ny fanavaozana mandeha ho azy an'ny WhatsApp. Amin'ny manaraka ny fampiharana dia misy fanavaozana azo atao, tsy mila manao na inona na inona ianao. Hivoatra ho azy izy io.